မီးဖိုချောင်ထဲမှနစ်မြုပ်သည့်ရောနှောခြင်း၊ မီးဖိုချောင်ခုံးရောနှောခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့်မီးဖိုချောင်သုံးချောင်းနှစ်ခု
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောစပ်ပါ,Pull Down Kitchen Sink ရောနှောစက်,2 နည်းလမ်းများမီးဖိုချောင်နစ်မြုပ် Faucets,၂ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀ င်သောရေကန်များကိုကိုင်တွယ်သည်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါ > မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောနှော
မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောနှော ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောစပ်ပါ, Pull Down Kitchen Sink ရောနှောစက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ,2နည်းလမ်းများမီးဖိုချောင်နစ်မြုပ် Faucets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Single Handle Faucet မီးဖိုချောင်အနက်ရောင်ကြေးဝါနစ်မြုပ်
လူပျို Lever ကြေးဝါကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားမီးဖိုချောင် Faucet
Golden Finish ကုန်းပတ်မီးဖိုချောင် Faucets
7-shaped အနက်ရောင်နှင့်ရွှေမီးဖိုချောင်သုံးရောနှော faucet
ကြေးဝါကုန်းပတ် Chrome မီးဖိုချောင် Faucet တပ်ဆင်ထားသည်
White Brass ကုန်းပတ်မီးဖိုချောင် Faucet တပ်ဆင်ထားသည်
လက်ကိုင် Chrome ကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောဆေးဆေးပါ
တစ် ဦး တည်း Lever မီးဖိုချောင်ကြေးဝါ Chrome ကိုရောနှော
မီးဖိုချောင်သုံးထွက်ပစ္စည်းများ faucet များကို Chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
Handy faucet ထုတ်လုပ်သူသည်နောက်ဆုံးပေါ် Black-gold ဆွဲအား Down Kitchen Sink Mixer Faucet ကိုစတင်မိတ်ဆက် ခဲ့သည်။ အားသာချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၁ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော reflex control သည်မူလအနေအထားသို့လျင်မြန်စွာနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိနိုင်သည်။ အနက်ရောင် - ရွှေဆွဲယူသောမီးဖိုချောင်သုံး...
အနက်ရောင် - ရွှေမီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောနှောခြင်းကိုထိပုတ်ပါ ရွှေအနက်ရောင် Pull Down Kitchen Sink Mixer Faucet သည်သမားရိုးကျ faucet နှင့်ကွဲပြားပြီးလူသားဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သောရေထွက်ပေါက်နည်းလမ်းများဖြစ်သောရေချိုးခန်းရေနှင့်လောင်းသောရေ။ အခိုးအငွေ့ကဲ့သို့သောရေချိုးရေသည်အားကြီးစွာပျံ့နှံ့သွားသည်၊...
Handy ` s တစ်ကိုယ်တည်းသောကြေးဝါအနက်ရောင် pullout မီးဖိုချောင်စုပ်စက်ရောနှောခြင်း၏ အားသာချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၁ မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောနှော faucet s ကိုထွက်က Black ဆွဲထုတ်ကဖလပ်ဧရိယာချဲ့ထွင်ထားတဲ့ 40-60 စင်တီမီတာ, ဆွဲနိုင်ပါတယ်ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆွဲထုတ်အလိုအလျောက်ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၂။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်...
ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများ၏အိမ်တွင်းမီးဖိုချောင်တံတိုင်းအားလုံးနီးပါးသည်ယခုအခါရေပူနှင့်ရေအေးကြေးဝါဆေးများကိုအသုံးပြုနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်လူအများစုကအပူနှင့်အအေးမီးဖိုချောင်သုံးအရောအနှောများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသနည်း။ ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ ကြည့်ကြရအောင်...
အိမ်တွင်းမီးဖိုချောင်သုံးပုတ်အိမ်များသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာပေါက်ကြားလိမ့်မည်။ သငျသညျအသစ်တစ်ခုကိုမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါပြောင်းလဲလိုလျှင်, အချိန်တော်တော်များများယူလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်မီးဖိုချောင် faucets ကမီးဖိုချောင် faucet ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုပြောပြပါတယ် ၁။...
ကြေးနီ faucets အဆိုပါပန်းကန်အရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနက်ရောင် faucet တပ်ဆင်ထားပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကြေးဝါမီးဖိုချောင် faucets အရည်အသွေးမြင့်အမျိုးသားရေးစံကြေးဝါများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် နှင့်ဆွဲငင်အား မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသောအာမခံသော အပိုင်းအစအတွက်သွန်းသည်...
ရွှေ brushed မီးဖိုချောင် faucet ၏မျက်နှာပြင်သည် ပိုးအမှတ်အသားများကိုပြသလိမ့်မည်။ ရွှေ brushed မီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင် ၏အသွင်အပြင် သည်ချောချောမွေ့မွေ့မှန်မျက်နှာပြင်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အရောင်ခြယ်။ ခံစားရသည်။ အထိ5လွှာအထိ၏ electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုမျက်နှာပြင်ရေရှည်အလင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖောင်းပွနေတဲ့ faucet...
ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားသည့်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောပုတ်များ၊ အဆင့်မြင့် NO.59 သောကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါစီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ဘုတ်များ၊ ရွှေဖြူ၊ စိတ်ကြိုက်အရောင်များကိုအိမ်ဖြူတော်နှင့်အနက်ရောင်ကဲ့သို့သောအိမ်များ၊ ထိပ်တန်းစုပ်ယူသည့်ပိုက်များ၊ ထွက်ပေါက်ပေါ်ရှိထွက်ပေါက်ပေါ်တွင် filter ကို aerator,...
အနက်ရောင်မီးဖိုချောင်သုံးအပူနှင့်အအေး faucet အဓိကကိုယ်ထည်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါဆွဲငင်အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အနက်ရောင်သုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ သုတ်လိမ်းရန်အလွှာ ၅ ခုရှိသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏အနက်ရောင်တစ်ခုလုံးသည်ဖက်ရှင်ပုံစံသာမကဘဲမီးဖိုချောင်မှအမဲဆီများကိုလည်းခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။...
အဘယ်အရာကို faucet မီးဖိုချောင်တွင်အသုံးပြုသည် မီးဖိုချောင်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ရေနံအစွန်းအထင်းများနှင့်ဖုန်များပါသောလက်များကို faucet နှင့် faucet ကိုမြေဆီလွှာတွင်ဖွင့်ရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်သည့် Handy ၏ ကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ကိုရွေးချယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ချောကျိကျိ...
ကျန်းမာသန်စွမ်းနိမ့်ခဲ single- လီဗာစတုရန်းစီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင် ၏ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း ။ သင်ရထိုက်သော အပူနှင့် အအေးမျိုးစုံဖြစ်သော Home Kitchen Taps of Handy ၇- ပုံအနက်ရောင်ရွှေမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသော အဓိကခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆင့်မြင့်အမှတ် ၅၉ ကြေးဝါ သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည်။ ၄ င်းသည် ၄၈ နာရီဆား ခုံဆေးသုတ်။...
အဆိုပါစက်ရုံတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု, စျေးနှုန်းတတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, B, K သည် itchen ရောနှော T ကထွက်ပေါက်ပိုက်အဆိုပါကောင်တာဒါပေမယ့်လည်းစုပ်များသောအားဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမရှိပါရှိရာအရပ်တို့ကိုသန့်ရှင်းရေးအတှကျအဆငျမသာဖြစ်သော 360 °, လှည့်နိုင်ပါတယ် APS ကင်းမဲ့နေသည်။ အနက်ရောင်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောဆေးရောစပ်စက်...
Handy ` s Plating Milky White တစ်ပေါက်တစ်ပေါက်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောအပုတ် များသည်နို့ရည်ဖြူသောကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီးရေစက်ရေထွက်ပေါက်သည် ပို၍ ပျော့ပြောင်းလာသည်။ အသွင်အပြင်သည်စတိုင်ကျ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ မီးဖိုချောင် တွင် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပါ ။ မီးဖိုချောင်သုံးရောနှော Faucet Plating Milky White Rocker ခလုတ်၊ ပိုက်ကို...
နှိပ်တဲ့အခါလူအများစုကဘယ်လိုထင်ကြသလဲ။ ဒါက faucet တံဆိပ်လား၊ faucet စျေးလား၊ အများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်သည့် faucet ၏အရည်အသွေး? အကယ်စင်စစ်လူများစွာသည်ငါကဲ့သို့စဉ်းစားကြသည်။ အရည်အသွေး ပိုကောင်းတယ်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အရမ်းလောဘမကြီးသင့်ဘူး။ လူသိများတာကအကောင်းဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ဟုတ်လား Huandi ၏မီးဖိုချောင်...
ပူပြင်း။ အအေးခန်းမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ရန်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ အအေးနှင့်ရေအေးရေချိုရည်များ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအဘယ်နည်း။ အဆင်ပြေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆောင်းရာသီတွင်ပန်းကန်များကိုရေပူဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆေးကြောနိုင်သည်။ သင်မလိုအပ်တော့ပါ ဟင်းလျာများသို့မဟုတ်ရေအေးရေကိုဆေးကြောဖို့ရေပူပြုတ်။...
အပြာနှင့်ငွေအကြား Chrome အရောင်။ နေရာလေးကို Single-လက်ကိုင်က c hrome သောကြေးဝါမီးဖိုချောင်ရောနှော faucet , 8-12μအထူနှင့်6μထက်ပိုသောနီကယ်အလွှာရှိသည်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ရှိပါတယ်။ ချေးခြင်း၊ မြင့်မားသောဓာတ်တိုးနိုင်မှု၊ အားကြီးသောအက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခရိုမီယမ်အရောင်၏သတ္တုသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည် faucet...
faucet လေးသည်ဗဟုသုတများစွာရှိရုံသာမက၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် switching လုပ်ရုံထက်မကပါ။ ကောင်းမွန်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောဆေးကြောခြင်းသည်ရေချိုးခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်အတွက်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အိမ်တစ်အိမ်လုံးလုံခြုံစိတ်ချရသော "သော့ခလောက်" လည်းရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတော်များများရှိသည်...
Pull Out Kitchen Sink Mixer ၏အားသာချက်မှာ၎င်းကိုဆွဲယူနိုင်ခြင်း၊ ၄၀-၆၀ စင်တီမီတာကိုဆွဲထုတ်။ ရနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ ရေထုareaရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ ရေနစ်မြုပ်နိုင်သောထောင့်ကို အလွယ်တကူရ နိုင်သည် ; အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ အဆိုပါအံဆွဲ၏ထွက်ပေါက်အစိတ်အပိုင်း၏ဒီဇိုင်းကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီဆွဲတစ် ဦး ဦး...
ဆွဲချမီးဖိုချောင် faucet တာရှည်လား? Pull Out Kitchen Sink Mixer ဘောင်းဘီ များကိုခေတ်မှီမိသားစုအများစုကနှစ်သက်ကြသည်။ ငါတို့ မီးဖိုချောင် faucets ကို ဝယ်တဲ့အခါ, သင် မီးဖိုချောင် faucets ဖြိုချတာရှည်ခံခြင်းရှိမရှိသင်သံသယရှိစေခြင်းငှါ? သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နေရာလေးကိုဒီမှာပါ။ Handy's Pull Down Kitchen Sink...
တရုတ်နိုင်ငံ မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်ရောနှော ပေးသွင်း
မီးဖိုချောင်သုံးဆေးကြောစက်သည်မီးဖိုချောင်စုပ်စက်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်၊ တစ်ပေါက်တည်းကုန်းပတ်တပ်ဆင်ခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ထွက်ပေါက်ရေပိုက်ကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ အဓိကကိုယ်ထည်သည် Class H59 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါဆွဲငင်အားကိုအသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပြင် 8 - 12μmအထူရှိသော electro plating, bright and corrosion resistance အားဖြင့်ပြီးစီးသည်။ 40cm ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောရေပိုက်၏နှစ်ပိုင်းတွင်မီးဖိုချောင်တွင်အအေးခံကိရိယာပါ ၀ င်သည်။
Pull Down Kitchen Sink ရောနှောစက်
2 နည်းလမ်းများမီးဖိုချောင်နစ်မြုပ် Faucets
၂ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀ င်သောရေကန်များကိုကိုင်တွယ်သည်